Otu esi etinye Python Pip na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
October 23, 2021 August 20, 2021 by Jọshụa James
Onye njikwa ngwugwu PIP2 ma ọ bụ PIP3 VS APT
Wụnye Python 2 ma ọ bụ 3 na Ubuntu 20.04
Wụnye Eke Ọgba 2
Wụnye Eke Ọgba 3
Wụnye PIP 2 ma ọ bụ 3 na Ubuntu 20.04
Otu esi eji PIP na Ubuntu 20.04
Otu esi ewepu PIP na Ubuntu 20.04
PIP bụ njikwa ngwugwu ọkọlọtọ maka ịwụnye Python ngwugwu. Site na PIP, ị nwere ike depụta, chọọ na budata ka ịwụnye ngwugwu sitere na Python Package Index (PyPI). Ebu ụzọ tinye PIP na Python installer kemgbe ụdị 3.4 maka ntọhapụ Python 3 na 2.7.9 maka Python 2 ma jiri ọtụtụ ọrụ Python rụọ ọrụ nke ọma.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye usoro PIP2 ma ọ bụ PIP3 Ubuntu 20.04.
OS akwadoro: Ubuntu 20.04 - nhọrọ
Ngwungwu achọrọ: Python2 ma ọ bụ Python3.
Maka ndị ọhụrụ na asụsụ mmemme Python kpam kpam, ị nwere ike ịnọ na-eche ihe dị iche n'etiti PIP2 na PIP3 bụ. Iji chịkọta ya, PIP2 bụ njikọ dị nro maka otu onye nrụnye na-agba ụdị Python ochie. PIP3 bụ ụdị pip emelitere nke ejiri maka ya Python 3+.
A na-atụ aro nke ukwuu iji Python 3 na PIP3, ma ị ga-emelite nke a ozugbo enwere ike.
Ajụjụ a na-ajụ mgbe niile ka m kwesịrị iji APT ma ọ bụ PIP. Nke a bụ nhọrọ nke onye ọrụ ọ bụla ga-emerịrị. APT na-adị ngwa ngwa mana ọ bụ ihe ochie karịa ebe a na-eji PIP budata ma wụnye ngwugwu ozugbo site na PyPI. Maka ndị na-amaghị, Python Software Foundation na-akwado PyPI, onye njikwa ngwugwu na-emekọ naanị ngwugwu Python nke na-emelite karịa nke Canonical kwadoro site na APT. Naanị ihe ndọghachi azụ nke iji PIP site na PyPI bụ na ngwugwu nwere ike iwe ogologo oge iji wụnye.
Site na ndabara, Ubuntu nwere Python2, nke enwere ike itinye ya na ya Python ma ọ bụ Python2 iwu.
Iji tinye Python2, nke ga-eji PIP2 emechaa, jiri iwu a:
Ọzọ, gaba na Wụnye PIP wee wụnye ụdị kwekọrọ na nrụnye Python gị.
Iji tinye Python 3, nke ga-eji PIP3 emechaa, jiri ihe ndị a:
Iji wụnye PIP na Ubuntu 20.04, ị ga-achọ ijide n'aka na etinyere ebe nchekwa Eluigwe na Ala:
Iji wụnye PIP2, ị ga-achọ ibudata .py script dị ka ndị a:
Ugbu a, mee ihe .py edemede
ụdị Y, wee pịa tinye igodo ịga n'ihu nwụnye.
Iji gosi ma arụnyere PIP2 nke ọma, mee ihe ndị a iwu ụdị:
Iji wụnye PIP3 (maka Python 3+):
Iji gosi ma arụnyere PIP3 nke ọma, mee ihe ndị a iwu ụdị:
PIP nwere nnukwu ndepụta ngwugwu enwere ike ịwụnye, ụzọ dị mfe iji hụ ụfọdụ ihe dị bụ iji mee ndepụta iwu PIP na ịchọ. Iwu ndị a ga-arụ ọrụ na PIP na PIP3 na obere mgbanwe, n'ezie.
Nkuzi a ga-eji ụfọdụ uleles n'okpuru maka PIP3.
Nke mbụ, ka ịlele ndepụta nke iwu pip niile na nhọrọ, pịnye iwu a:
Ọmụmaatụ nke iji enyemaka pip3, ọmụmaatụ n'okpuru inweta enyemaka na nbudata:
Ka ịdepụta ngwugwu dị maka ịwụnye na PIP3, jiri ihe ndị a:
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwetu ndepụta ahụ, jiri njirimara ọchụchọ dị ka ndị a:
Iji tinye PIP3 ngwugwu, jiri iwu a:
N'ihe atụ dị n'elu, nke Nọmba etinyere ngwugwu.
Iji wepu ngwugwu PIP3, jiri iwu a:
ụdị Y, wee pịa tinye igodo iji mezue iwepụ.
Iji wepu PIP na sistemụ Ubuntu gị, soro iwu ndị a dabere na ụdị ị rụnyere.
Iji wepu PIP:
Iji wepu PIP3:
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye PIP maka Python ma ọ bụ Python 3 wee chọọ, wụnye na wepu ngwugwu.
Iji chọpụta ozi ndị ọzọ na PIP, gaa na onye ọrụ gọọmentị akwụkwọ.
Categories Ubuntu Tags Python, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo